ग’र्भावस्थामा यौ’ न स’म्ब’न्ध राख्नु कति सुरक्षित ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ स्वास्थ्य/ग’र्भावस्थामा यौ’ न स’म्ब’न्ध राख्नु कति सुरक्षित ?
श्रीमान श्रीमतीबीचको स’म्ब’न्ध बलियो बनाउनको लागि यौ’ नको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यौ’ न दाम्पत्य जीवनको अनिवार्य हिस्सा हो ।
सुखद् यौ’ न–जीवनले दाम्पत्य स’म्ब’न्धलाई थप प्र’गाढ बनाउँछ । अक्सर दम्पतीबीचको मन’मु’टाव, झै–झ’ग’डादेखि स’म्ब’न्ध वि’च्छेद को कारणमध्ये उनीहरुको खराब यौ’ न–जीवन पनि हो । यद्यपि दम्पती बीच हुने यौ’ न स’म्ब’न्धको पनि आफ्नै सीमा र सर्तहरु छन् ।
जस्तो कि, यौ’ न क्रियाका लागि दुबैको उत्सुकता र सहभागिता हुन आवश्यक हुन्छ । एकअर्काको इच्छा विपरित गरिने यौ’ न क्रियाले भने हिं’साको रुप लिन्छ । कतिपय क्षणमा महिलाहरु विभिन्न शा’री’रिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् ।
त्यस्तो बेला यौ’न स’म्प’र्क गर्दा उनीहरुलाई पी’डा हुनसक्छ । तसर्थ यौ’ न स’म्ब’न्धका लागि सबै समय अनुकुल हुनुपर्दछ । जसमध्ये एक चरण गर्भावस्था हो । गर्भ रहिसकेपछि महिलाको शा’री’रिक अवस्था परिवर्तन हुन्छ, साथै मानसिक पनि ।
यस्तो अवस्थामा यौ’ न क्रिया जारी राख्न हुन्छ वा हुँदैन रु ग’ र्भावस्थामा महिलाले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसबेला महिला मानसिक र शा’री’रिक रुपले स्वस्थ, तन्दुरुस्त, खुसी र सुखी हुन जरुरी हुन्छ ।